Inona no dikan'ny jiro ao amin'ny HomePod? Ireo fampitandremana 6 mety | Avy amin'ny mac aho
Inona no dikan'ny jiro ao amin'ny HomePod? Ireo fampitandremana 6 azo atao
Araka ny efa fantatrao, ny HomePod dia manana efijery mora tohina eo an-tampony. Ao, ho fanampin'ny fisehoan'ny Siri, dia hanana fifehezana volume ihany koa isika hifehezana ny mozika na podcast antsika amin'ny fotoana rehetra. Na izany aza, tsy izy ireo ihany no fisehoana mety ho hitanao eo amin'ity efijery ity. misy ny jiro fampitandremana 6 total izay azon'ny mpandahateny atolotra anao.
Ny mpandahateny marani-tsaina an'i Apple dia efa nisy tao fotoana fohy - eny, izy ireo, mazava ho azy. Ary isan'andro dia mahafantatra antsipiriany bebe kokoa momba ny fiasan'izy ireo isika. Amin'ity indray mitoraka ity entinay ianao ny lisitr'ireo Jiro fampitandremana 6 azon'ny HomePod atolotra anao eo amin'ny efijery amboniny. Ka raha mieritreritra ny hahazo iray ianao rehefa misy any Espana dia soraty daholo sy ny dikan'izy ireo.
1 Fampitandremana fahazavana voalohany amin'ny HomePod: jiro fotsy mihetsika amin'ny boribory
2 Jiro HomePod faharoa: jiro fotsy manjelanjelatra
3 Jiro fampitandremana fahatelo an'ny HomePod: faribolana maro loko miodina
4 Fahazavana HomePod fahaefatra: boribory maitso manjelanjelatra
5 Fahazavana HomePod fahadimy: sary masina "+" sy "-"
6 Jiro fampitandremana fahenina amin'ny HomePod: jiro mena amin'ny faribolana
Fampitandremana fahazavana voalohany amin'ny HomePod: jiro fotsy mihetsika amin'ny boribory
Raha mampiseho ny HomePod a Ny jiro fotsy manodidina ny efijery dia hidika fa mandeha ianao na manavao ny kinova an'ny rindrambaiko tena. Ary koa, ny HomePod dia afaka manavao ny azy ho azy na amin'ny tanana, raha irinao. Ho an'ireto farany dia tsy maintsy tsindrio ilay kisary miendrika zana-tsipìka hanananao eo amin'ny zoro ankavia ambony. Ho hitanao ao ny fizarana "Fanavaozana ny lozisialy" ary ilazana aminao raha misy kinova vaovao na tsia.
Jiro HomePod faharoa: jiro fotsy manjelanjelatra
Ny jiro iray hafa na jiro fampitandremana mety asehon'ny HomePod anao eo amin'ny efijery amboniny dia jiro fotsy indray. Na izany aza, amin'ity tranga ity dia hazavana manjelanjelatra na mitselatselatra izy io. Midika izany fa vonona ny hatsangana voalohany. Na, ny fanairana na ny fanisana dia efa nivoaka.
Jiro fampitandremana fahatelo an'ny HomePod: faribolana maro loko miodina
Ity fanamarihana ity dia mety ho fantatrao kokoa noho ny mahazatra. Ity no boribory mihodina maro loko izay maneho ny Siri virtoaly mpanampy. Midika izany fa niantso ny mpanampy ianao ary miandry ny fanontanianao na ny baikon'ny feonao.
Fahazavana HomePod fahaefatra: boribory maitso manjelanjelatra
Manohy ny jiro fampitandremana bebe kokoa avy amin'ny mpandahateny mahay an'i Apple izahay. Ary tonga amin'ny iray izay soloina faribolana maitso manjelanjelatra isika izao. Midika izany fa antso an-tariby avy amin'ny iPhone dia nafindra tao amin'ny HomePod. Toy izany koa, hanana ny fanaraha-maso volume ianao eo amin'ny efijery raha toa ka mila manitsy ny audio ianao.
Raha te-hamindra antso ho an'ny mpandaha-teny ianao, dia mora toy ny mandray antso miditra sy mandray ny hook, ao amin'ny app «Telefaonina», kitiho ny kisary «Audio» ary safidio ny HomePod anao avy amin'ilay lisitra izay miseho. Rehefa manantona sy mamarana ny antso ianao dia tokony tap ny rantsan-tànanao eo amin'ny efijery mpandahateny. Azonao atao ihany koa ny mamarana ny antso avy amin'ny iPhone, mazava ho azy.
Fahazavana HomePod fahadimy: sary masina "+" sy "-"
Araka ny efa nambarantsika tamin'ny fampandrenesana teo aloha, azo atao ihany koa eo amin'ny efijery izany maneho ny fanaraha-maso mora tohina mba hahafahanao mifehy ny haavon'ny feo mivoaka amin'ny mpandahateny. Amin'ity tranga ity dia hiseho ny fanaraha-maso raha tsy mozika na podcast no mandeha.
Jiro fampitandremana fahenina amin'ny HomePod: jiro mena amin'ny faribolana
Ny jiro fampitandremana farany azon'ny HomePod haseho anao dia jiro mena mihetsika amin'ny faribolana. Midika izany fa ny mpandahateny anao mamerina amin'ny toeran'ny orinasa io. Mety hahasoa izany raha toa ka tsy mahomby amin'ny asany izy amin'ny fotoana sasany ary te-hamerina amin'ny laoniny ny zava-drehetra ianao. Safidy ihany koa ny misafidy raha toa ka manapa-kevitra ianao fa tsy ny fitaovanao ilay mpandahateny mahay ary te hivarotra azy ianao.
Mba hamerenana ireo fitaovana dia manana fomba maro hanatanterahana azy ianao:
Esory ny HomePod amin'ny herinaratra ary ampidiro indray. Avy eo tsindrio ny efijery mpandahateny hatrany mandra-pahatongan'ilay jiro fotsy manjelanjelatra mampahafantatra anao fa vonona hamboarina izy
Avy amin'ny app «Home» amin'ny iPhone na iPad anao ary amin'ny antsipirian'ny mpandahateny, safidio «Esory ny fitaovana»
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Inona no dikan'ny jiro ao amin'ny HomePod? Ireo fampitandremana 6 azo atao
AirCord, fitaovana iray hafa hiarovana ny AirPods anao tsy hianjera